5 martida ayaa ku dhimatay, tobanaan kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay Fulkaano Fulkaano ee New Zealand
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » 5 martida ayaa ku dhimatay, tobanaan kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay Fulkaano Fulkaano ee New Zealand
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
New Zealand booliska ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan shan qof ladilay kadib markii fulkaano ay ka qaraxday xeebta gacanka Bay of Plenty. Hawlgal badbaadin ayaa la bilaabay iyada oo ay jiraan warar sheegaya in ku dhowaad 50 qof laga yaabo inay ku sugnaayeen ama ku dhow jasiiradda.
Booliska ayaa goor sii horreysay sheegay in wax ka yar 50 qof laga yaabo inay ku dhowaayeen ama jasiiradda ku sugnaayeen intii uu qarxayay, qaar ka mid ahna weli “lama hayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen,” halka kuwo kalena la daad gureeyay. Ugu yaraan hal qof ayaa lagu soo warramey inuu si xun u dhaawacmay.
Inta badan dadka ay waxyeelada ka soo gaadhay qaraxa ayaa la sheegay inay yihiin dalxiisayaal yimid jasiiradda markabka dalxiiska ee 'Ovation of the Sea', oo ah markabkii ugu weynaa ee markab dalxiis.
"Marxaladdan, waa khatar aad u weyn in booliska iyo badbaadintu ay u gudbaan jasiiradda It [Waxay] hadda ku daboolan tahay dambas iyo walxaha folkaanaha," ayuu ku-xigeenka Taliyaha Bilayska John Tims u sheegay suxufiyiinta.
Fulkaanaha ayaa qarxay abaare 2:11 pm waqtiga maxalliga ah, isaga oo soo tuuray ash badan iyo qiiqa cawlan 12,000 fiit hawada.
Aag duulimaad ka caagan ayaa lagu dhawaaqay hareeraha jasiiradda.
In kasta oo ay tahay fulkaanaha ugu firfircoon waddanka, oo u nugul qaraxyada lama filaanka ah, Jasiiradda Cad ayaa weli ah goob dalxiis caan ah, iyada oo soo jiidata dad badan oo soo booqda maalin kasta doon iyo tamashleyn socod.